The Farriers - Family Cottage in the Peak District
Isibaya esiguqulwe kahle esisendaweni enokuthula esifundeni saseSouthern Peak. IFarriers ikumazinga amabili, futhi ilungele imindeni emikhulu, ilele emihlanu. I-Croft Farm iyindawo ekahle yalabo abathanda ukuhlola ngaphandle, abanokufinyelela okuyimfihlo okuqondile ku-The High Peak Trail. I-Chatsworth House iyimizuzu engama-25 yokuhamba, eduze ne-Bakewell, iMatlock ne-Ashborne.
Ukufika/ukuhamba kwangoLwesihlanu ubusuku obuyisi-7 noma ubusuku obu-3. NgoMsombuluko ubusuku obu-4
I-Farriers isetshenziswa kuphela, inendawo yompheme ngemuva, kanye nendawo enotshani okwabelwana ngayo ukuze ujabulele ukukhanya kwelanga kwasehlobo. Ikhishi elihlome ngokugcwele elinemishini yesimanje yalabo abathanda ukupheka! I-WiFi yamahhala kuyo yonke indawo. Ngicela uqaphele ukuthi anginikezi amathawula...
Sinokufinyelela okuyimfihlo okuqondile ku-High Peak Trail - ilungele labo abathanda ukuhlola ngaphandle. Letha amabhayisikili akho futhi uwagcine esibayeni sethu esivikelekile.
Jabulela usuku lomndeni lokuphuma ne-Chatsworth House kanye ne-Haddon Hall nje uhambo lwemizuzu engama-25. Hamba kancane futhi ube nosuku olugcwele olujabulisayo e-Alton Towers, okuyimizuzu engama-40 ngemoto.
Ikotishi lethu litholakala eningizimu Peak District lizungezwe izindawo ezinhle zasemaphandleni. Simaphakathi nokuvakashela izindawo eziningi ezikhangayo endaweni yendawo - lezi zihlanganisa, iChatsworth House, iHaddon Hall, iCarsington Water, iGullivers Kingdom kanye ne-Alton Towers. Sisendaweni ethule kodwa amadolobhana iMatlock, Ashbourne kanye neBakewell akuhambo olufushane nje.
Sicela Uqaphele: Ngenxa yobhubhane lwe-Covid-19, nakuba izindawo eziningi ezikhangayo sezivuliwe, kunemihlahlandlela eqinile yebanga lomphakathi ekhona noma imikhawulo enanini lezivakashi ezingosini. Eziningi zezinto ezihehayo nazo zicela izivakashi ukuthi zibhukhe kusengaphambili - ngokuvamile ku-inthanethi. Seluleka zonke izivakashi zethu ukuthi zihlole kusengaphambili ngaphambi kokuvakashela noma yiziphi izindawo ezikhangayo zasendaweni.
Ngenxa yobhadane lwe-COVID-19, ukuze ngilondoloze ukuqhelelana komphakathi ngeke ngenze ukuvakasha kwami kokuvamile kokwamukela. Nokho, uma udinga noma yini nhlobo ngizotholakala ngocingo noma nge-imeyili.